トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Indlela yokuthola izitolo kakhulu ukuthi ukusizakala umagazini e-mail kusuka wamakhaza pachinko
Wonke umuntu kusukela pachinko eshintsha, ulwazi lebhizinisi izenzakalo futhi ngosuku, ngicabanga ukuthi abanye abantu baye bahileleka eposini. Ngoba zonke izinsuku ukufinyelela yini ama-imeyili, ngiye ngezwa ukuthi abantu abaningi ukuthi akuzona bheka ngokucophelela. Nokho, uma izinhlungu Uthola imeyili, ulwazi olufunayo akulona igcinwe esandleni kuyinto ukulahlekelwa.
Ngakho-ke, thina ukwethula ukusetshenziswa indlela ezinhle ukulethwa imeyili. I mail zebhizinisi pachinko eshintsha, uza ogibele abeke ulwazi umcimbi and Xintai ulwazi kosuku, noma amandla. E-mail, ngisho ngaphandle kokuya sasemakhazeni pachinko, oshumayela wakuthola kanjani ukwaziswa esitolo.
ukusetshenziswa okunekhono indlela enjalo e-imeyili, funda isisusa uphume mail, lapho kumele kwenziwe izitolo ukukhetha kahle uma kuqhathaniswa nezinye izitolo. Okokuqala, kungakanani ulwazi umcimbi, kungakhathaliseki umcimbi ukuthi ukuphoqa ivuliwe, ungakwazi ukuqagela model umcimbi imisiwe.
isibonelo, njalo uma kungekho imodeli ezisebenzayo kakhulu imifanekiso umcimbi, kwandisa amathuba Gase okuhloswe ngaso ukusebenza. Endabeni izenzakalo welula ngomfutho, imodeli nezibonakaliso imodeli ukuthi iqinisa noma alethwe imodeli umcimbi, kukhona ukuthambekela ukuzama ukukhalaza yokubhadala.
eyashukumisela isimo emicimbini enjalo, bese uzama ukufunda kusukela mail, kubukeka ngathi akudingekile ukuya ukuchitha umcimbi, ayinayo ukuba utshalomali nokumosha. Ngaphezu kwalokho, kwathi sekusele izinsuku ezimbalwa umcimbi omkhulu, ngolunye usuku labetibambile izenzakalo, kukhona ukuthi imeyli okuqukethwe main uthunyelwa.
ezifana e-mail, ngoba uhlelo lokutakula ngokuhambisana umcimbi, wukuthi akukho onobuhle nenhloso ngokwanele ukubeka ngosuku ibhizinisi e-mail. Ezinsukwini ezimbalwa ngaphambi simemezelo umcimbi iye zaba eziningi, uthi ephephile kungcono hhayi esitelekeni.
Futhi, ngicabanga ukuthi ngezinye izikhathi kuba khona ukuthi imeyili ilethwa ngaphezu kwesikhathi evamile.
mail anjalo okungajwayelekile, ephezulu isethi ngaphandle kwesaziso sangaphambili Noma wenza isethulo yesikhulumi, ne noma yamemezela etafuleni amnandi nail, kusukela ezikhathini eziningi ulwazi inhloso, kungcono ukuba qinisekisa ukubheka, ngicabanga ukuthi kuhle.
Nokho, kusukela iphuzu Ngenxa yesimo samanje kuvusa ingqondo ukugembula, ngakho ayikwazi die ngazinye simemezelo Ukusetha ukuthi isaziso, kuyinto kungalindeleka kude kangakanani, kukuwe esitolo. Amalungu e-mail, kunezindlela eziningi Uma enizibiza i ukwaziswa okuhle kakhulu ngaphambili kunamanye amakhasimende.
Xintai lottery kanye lottery isikhathi umehluko evulekile, wena noma ungazise phambi ukuba isikhathi ukushicilelwa. Ngenxa yalokho, ngisho esimweni ukuthi ishayiwe ngesikhathi kwezinye izitolo, kuba okuhunyushiwe noma ashaye ukuma okuhle kwezimiso olwengeziwe. Kusukela
pachinko eshintsha ezihlukahlukene, ezinye labo abase bethole e-mail, abanye abantu izitolo ezahlukene ukuba ngesikhathi. Inikelwe ngesikhathi sangempela, njenge-e-mail kombiko wesimo, ngicabanga ukuthi ngobuciko kungashiwo ukuthi abantu belwa ubani bayakwazi ukusizakala.
ezinjalo, sisebenzisa kahle ulwazi etholakale ngokuncanyelwayo, njengoba kuqhathaniswa ezihlukahlukene pachinko eshintsha, ngicabanga ukuthi kungase uzama ukuya phansi izitolo oluhlose ngezikhathi ezithile.